Mumble 1.3.4, यो भ्वाइस च्याट अनुप्रयोगको लागि अपडेट | ubunlog
Mumble 1.3.4, यो भ्वाइस च्याट एपको लागि अपडेट
डेमेन ए | | Ubuntu
अर्को लेखमा हामी मुम्बललाई हेर्नेछौं। यसको नवीनतम जारी स्थिर संस्करण Ubuntu को लागि उपलब्ध भ्वाइस च्याट अनुप्रयोग 1.3.4 हो, जुन नि:शुल्क, खुला स्रोत, कम विलम्बता र उच्च गुणस्तर हो।
हामीले भनेजस्तै, मुम्बल ए भ्वाइस ओभर आईपी अनुप्रयोग (वीओआईपी) उच्च गुणस्तर र कम विलम्बताको जुन गेमरहरूलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको हो। यस कार्यक्रमको साथ, हामीसँग एक सामान्य उद्देश्य प्लगइन फ्रेमवर्क हुनेछ। प्लगइनहरू स्थितिगत डेटा डेलिभर गर्न प्रतिबन्धित छैनन् र कुनै पनि समयमा स्थापना र अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।
प्रशासकहरूले स्व-होस्ट गरिएको र डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा नियन्त्रण गरेकोमा Mumble को प्रशंसा गर्छन्। केही जटिल परिदृश्यहरूको लागि व्यापक अनुमति प्रणाली प्रयोग गर्छन्। अरूहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सर्भर API हरू प्रयोग गर्ने स्क्रिप्टहरू, वा होस्ट संगीत बटहरू र सर्भरमा जडान हुने जस्ता थप कार्यक्षमताहरू प्रदान गर्न चाहन्छन्। जोसँग अवस्थित प्रयोगकर्ता डाटाबेस छ तिनीहरूले अवस्थित खाता लगइन विवरणहरूको साथ प्रमाणीकरण सक्षम गर्न प्रमाणिकरणकर्ताहरूको प्रयोग गर्छन्।
1 Mumble को सामान्य विशेषताहरु
2 Ubuntu मा Mumble स्थापना गर्नुहोस्
2.1 स्न्याप प्याकेजको रूपमा
2.1.1 स्थापना रद्द गर्नुहोस्
2.2 एक Flatpak प्याकेज को रूप मा
2.2.1 स्थापना रद्द गर्नुहोस्
2.3 पीपीए मार्फत
2.3.1 स्थापना रद्द गर्नुहोस्
Mumble को सामान्य विशेषताहरु
कार्यक्रम छ नि: शुल्क सफ्टवेयर र खुला स्रोत, यो एक्स्टेन्सिबिलिटीको लागि पनि खुला छ।
कार्यक्रममा कम विलम्बता छ, जसले यसलाई बनाउँछ कुरा गर्न र खेल्नको लागि उत्कृष्ट.
यसले हामीलाई हाम्रो राख्न अनुमति दिनेछ निजी र सुरक्षित संचार, किनभने संचार सधैं इन्क्रिप्टेड हुनेछ। यसमा पूर्वनिर्धारित रूपमा सार्वजनिक/निजी कुञ्जी प्रमाणीकरण पनि छ।
यदि हामी खेलिरहेका छौं भने, कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्दछ इन-गेम ओभरले। यसले हामीलाई कसले बोलिरहेको छ, FPS र हालको समय हेर्न अनुमति दिनेछ।
छ स्थितिगत अडियो, जसले हामीलाई खेलमा रहेका खेलाडीहरूको कुरा सुन्न अनुमति दिनेछ।
यो संस्करण पनि समावेश छ पाठ सन्देशहरू पठाउँदा मार्कडाउन समर्थन.
स्टेरियो अडियो, यद्यपि यो अहिले सम्म प्लेब्याकमा प्रतिबन्धित छ।
यस कार्यक्रममा, प्रयोगकर्ताहरूले ए सेटअप विजार्ड जसले हामीलाई कन्फिगरेसन मार्फत मार्गदर्शन गर्नेछ, र यसरी माइक्रोफोनलाई सही रूपमा कन्फिगर गर्न सक्षम हुनेछ।
हामीलाई अनुमति दिनेछ प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपनामहरू सेट गर्नुहोस्.
तपाईं विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सन्दर्भ मेनु 'प्रयोगकर्ता च्यानलमा सामेल हुनुहोस्'.
हामीसँग विकल्प हुनेछ एकै पटक सबै सेटिङहरू रिसेट गर्नुहोस्.
अर्को सुविधा जुन हामीसँग उपलब्ध हुनेछ यसको सम्भावना हुनेछ विशिष्ट प्रयोगकर्ताको लागि पाठ-देखि-वाक् अक्षम.
यी यस कार्यक्रमको केहि सुविधाहरू हुन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन् बाट ती सबैमा परामर्श लिनुहोस् परियोजना वेबसाइट.
Ubuntu मा Mumble स्थापना गर्नुहोस्
Mumble तपाईं को लागि उपलब्ध छ Gnu/Linux, Windows र MacOS, साथै iOS र Android मोबाइलहरूमा स्थापना गर्न सकिन्छ.
यस कार्यक्रमको नवीनतम प्रकाशित संस्करण 1.4.230 हो। यो तपाईं बाट नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ GitHub रिलीज पृष्ठ, तर यसमा Ubuntu को लागि प्याकेजहरू छैनन्, त्यसैले यस लेखमा हामी 1.3.4 स्थापना हेर्नेछौं।
स्न्याप प्याकेजको रूपमा
बाह्य स्न्यापक्राफ्ट समुदायले प्रकाशन र मर्मत गर्दछ स्न्याप प्याकेज यस कार्यक्रमको। यसलाई Ubutnu मा स्थापना गर्न, हामीले केवल टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) खोल्न र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ:
स्थापना पछि, तपाईं सक्नुहुन्छ यसलाई सुरु गर्न कार्यक्रम लन्चर खोज्नुहोस्, वा सिधै टर्मिनलमा टाइप गर्नुहोस्:
स्थापना रद्द गर्नुहोस्
Para स्न्याप प्याकेज हटाउनुहोस् यस कार्यक्रमको, टर्मिनलमा (Ctrl+Alt+T) तपाईंले केवल आदेश लेख्नुपर्छ:
एक Flatpak प्याकेज को रूप मा
यदि तपाइँ यस कार्यक्रमको Flatpak प्याकेज स्थापना गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो आवश्यक छ कि हामीले हाम्रो उपकरणहरूमा यो प्रविधि सक्षम छ। यदि तपाइँ उबुन्टु २०.०20.04 प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईंसँग अझै छैन भने, तपाईं जारी राख्न सक्नुहुन्छ गाईड कि एक सहकर्मीले यो ब्लगमा केहि समय अघि लेखेका थिए।
जब तपाइँ यस प्रकारको सफ्टवेयर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, टर्मिनलमा (Ctrl+Alt+T) यो मात्र रहन्छ। स्थापना गर्नुहोस् फ्ल्याटप्याक प्याकेज टर्मिनल खोल्दै (Ctrl + Alt + T) र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्दै:
कार्यक्रम स्थापना भएपछि, तपाईं सक्नुहुन्छ कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस् हाम्रो कम्प्युटरमा लन्चर खोज्दै, वा टर्मिनल (Ctrl+Alt+T) मा कार्यान्वयन गर्दै:
flatpak run info.mumble.Mumble
यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने यस कार्यक्रमको स्थापना हटाउनुहोस्, तपाईंले भर्खर टर्मिनल खोल्नु पर्छ (Ctrl+Alt+T) र आदेश लेख्नुहोस्:
flatpak uninstall info.mumble.Mumble
यो कार्यक्रम स्थापना गर्न अर्को विकल्प आधिकारिक PPA प्रयोग गर्न हुनेछ। यो PPA हाम्रो प्रणालीमा थप्न सकिन्छ, टर्मिनल खोल्दै (Ctrl+Alt+T) र आदेश चलाउँदै:
पछि भण्डारबाट उपलब्ध सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्, अब सक्छ कार्यक्रम स्थापना गर्न अगाडि बढ्नुहोस् एउटै टर्मिनलमा प्रक्षेपण:
Para APT संग स्थापित यो कार्यक्रम को स्थापना रद्द गर्नुहोस्, यो केवल टर्मिनल खोल्न आवश्यक छ (Ctrl+Alt+T) र यसमा कार्यान्वयन गर्नुहोस्:
sudo apt remove mumble; sudo apt autoremove
Para भण्डार स्थापना रद्द गर्नुहोस् जुन हामीले स्थापनाको लागि प्रयोग गर्छौं, त्यही टर्मिनलमा लेख्नको लागि थप केही छैन:
sudo add-apt-repository -r ppa:mumble/release
यो हुन सक्छ मा यस कार्यक्रम को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् परियोजना वेबसाइट। थप पत्ता लगाउन, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ तपाईंको कार्यक्रमको बारेमा कागजातहरू परामर्श गर्नुहोस् GitHub भण्डार, वा को बारेमा यस कार्यक्रमको लागि प्लगइनहरू.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » Mumble 1.3.4, यो भ्वाइस च्याट एपको लागि अपडेट
Mumble 1.4 पहिले नै जारी गरिएको छ र धेरै परिवर्तन र समाचार संग आउँछ
Ubuntu 21.04 भोलि समर्थन समाप्त हुनेछ। जति सक्दो चाँडो अपडेट गर्नुहोस्